xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: လျှပ်တစ်ပျက်ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါးရှင်သံလျက်၏ " ဒီလို ရှိတယ်အိုဘယ့်ဆေးဆရာ" ဆောင်းပါးအား မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း (မန္တလေး) မှပြင်းထန်စွာရှုံ့ချကန့်ကွက်
၃။မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(မန္တလေး) အနေနှင့် ပြည်သူလူထုအား ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးအပ်နိုင်ရေးသာမက ယခုကဲ့သို့ ပြည်သူအများ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေနိုင်သည့် အခြေအနေကိစ္စရပ်များတွင် မှန်ကန်သော၊ တိကျသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးအပ်ရန်လည်း တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံယူပေရာ ထိုလျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ပါဆောင်းပါးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခိုင်အမာထားရှိသည့် ကုသချက်မှတ်တမ်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်များကို ကိုးကားပြီး ပြည်သူအများ၏ အကျိုးကို ရှေးရှုရည်ရွယ်၍ ဤသဘောထားကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပါသည်။
၄။ ဆောင်းပါးရှင် သံလျက် ရေးသားသော ထိုလျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ပါဆောင်းပါးတွင် ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည့် လူနာသည် မန္တလေးမြို့ရှိ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကြီးတစ်ခုသို့ ၁၇.၅.၂၀၁၁ ညနေ ၆း၄၅ နာရီတွင် ခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာ(Head Injury)ဖြင့် လာရောက်ပြသသည်။ ထိုခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသည့်အချိန်မှာ ထိုနေ့ ညနေ (၃း၀၀) နာရီတွင်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နေရာ မှာ ပြင်ဦးလွင်မြို့ဖြစ်သည်။ ထိုခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်အချိန် မှစ၍ ထိုဆေးရုံကြီးသို့ တက်ရောက် ကုသမှုခံယူသည့်အချိန်အထိ လူနာမှာ သတိလစ်မေ့မြောနေသည်။ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီး၏ စစ်ဆေးစမ်းသပ်ချက်အရ ဆရာဝန်ကြီးက ဦးနှောက်ဓာတ်မှန်ရိုက်ရန် (Computerized Tomographic Scan) ရိုက်ရန် ညွှန်ကြားသည်။ သက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ထိုဦးနှောက်ဓာတ်မှန်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ ၁။ ဦးနှောက်အတွင်း တုန်ခါခြင်း (Cerebral Concussion) ၂။ ဦးနှောက် လှုပ်ရွေ့ခြင်း (Cerebral Distorsion) ၃။ (ညာဘက်အခြမ်း)ဦးနှောက်အတွင်း သေးငယ်သော သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း (Intracerebral Small Haematoma) ဟု ရောဂါအမည်တပ်သည်။ ထို့နောက် ရောဂါနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွဲစိတ်ကုသရန်မလိုအပ်ကြောင်း၊ အနီးကပ်ကြည့်ရှုစီမံမှုဖြင့် လိုအပ်သည့်ဆေးချက်များ၊ ကုသထုံးများနှင့် ကုသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လူနာရှင်အား ရှင်းလင်းပြောကြား၍ လိုအပ်သော ဆေးချက်များ၊ ကုထုံးများကို ညွှန်ကြားကုသသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုလျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ပါဆောင်းပါးတွင် “ဒါပေမဲ့လည်း အသစ်စက်စက်လို့ဆိုတဲ့ CT Scan နဲ့ ဦးနှောက်ကို ရိုက်ကြည့်လိုက်တော့ အဖြေက ဘာမှမတွေ့ဟု ဆေးစာထွက်လာပါတယ်။ ကဲ… ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ " အခုလို CT Scan မှာ ဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့ အဖြေထွက်တဲ့အပေါ် ယုံကြည်မှုအရ ဆရာဝန်တွေကလည်း စောင့်ကြည့် အနေအထားပဲ ထားလိုက်တော့တယ်။” ဟူသော ဖော်ပြချက်သည် လုံးဝမှားယွင်းပါသည်။
၆။ လူနာ၏ ရောဂါနှင့်စပ်လျဉ်း၍သော်လည်းကောင်း၊ ကုသရာတွင် အသုံးပြုမည့် ဤကုသထုံးနှင့် စပ်လျဉ်း၍သော်လည်းကောင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသရန်မလိုဘဲ ဆေးဝါးများဖြင့်သာ ကုသရန်သာလိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်းကောင်း၊ လူနာ၏ အခြေအနေမှာလည်း အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရန် မရှိကြောင်းနှင့် ကုထုံးအလားအလာ(Prognosis) အနေနှင့် ရက်သတ္တပတ်ခန့်ကြာလျှင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ မည်ကိုလည်းကောင်း စိုးရိမ်ရန်မရှိကြောင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် လူနာရှင်မိသားစု ကို သေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၇။ ကုသချက်မှတ်တမ်းများအရ ထိုလျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ပါဆောင်းပါးတွင် ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည့် လူနာသည် ၁၉. ၅. ၂၀၁၁ နံနက် ၇း၃၀ နာရီတွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀. ၅. ၂၀၁၁ နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီတွင်လည်းကောင်း ဦးနှောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတို့၏ သဘာဝအရ နှလုံးခုန်နှုန်းများ တစ်မိနစ် ၅၄ ကြိမ် နှင့် တစ်မိနစ် ၅၂ ကြိမ်တို့သို့ အသီးသီးကျဆင်းသွားရာ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးက အခြားအရေးကြီးသော လက္ခဏာရပ်များဖြစ်ကြသည့် လူနာ၏ သိ-ခံစား-လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည်များကို တိုင်းတာအကဲဖြတ်သည့်စနစ် (Glasgow Coma Scale)ရမှတ်၊ သွေးဖိအား (Blood Pressure)၊ အသက်ရှုနှုန်း (Respiratory Rate)၊ ခန္ဒာကိုယ်အပူချိန် (Body Temperature) တို့နှင့် ညှိုနှိုင်းစဉ်းစားလျက် ၄င်းအရေးကြီးလက္ခဏာရပ်များ ကောင်းမွန်စွာ ရှိနေကြသည့်အလျောက် လိုအပ်သော ဆေးဝါးကုသ မှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြောင်းလဲကုသစေခဲ့ပါသည်။ လူနာအခြေအနေကို စောင့်ကြည်နိုင်ရန် ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်း လူနာကို နေ့စဉ် ကြည့်ရှုခဲ့ပေသည်။ လူနာ၏ သိ-ခံစား-လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည်များကို တိုင်းတာအကဲဖြတ်သည့်စနစ် (Glasgow Coma Scale) မှာလည်း လွန်စွာ ကျဆင်းသွားခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန်ကျန်းမာသောလူတစ်ဦးတွင် ရှိသည့် အမှတ် ဖြစ်သော တစ်ဆယ့်ငါးမှတ်အဖြစ်သာ သတ်မှတ်အကဲဖြတ်ပါသည်။ ဦးနှောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် လူနာအနေအထား(General Condition)မှာ ပုံမှန်(Normal)၊ အနည်းငယ်မှိန်း (Slightly Drowsy)နှင့် မူးဝေမှိန်း(Drowsy) ဟူသော အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသာ ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဆောင်းပါးရှင်သံလျက်၏ ထိုလျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ပါဆောင်းပါးတွင်“ ဒီကြားထဲ လူနာက နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ တဖြည်းဖြည်းထိုးကျလာတာ တစ်မိနစ်ကို အကြိမ် (၄၀) နဲ့ (၅၀)ခန့်သာရှိတော့တယ်။ " ဒီအတိုင်း လူနာကုတင်ပေါ်မှာ သတိရတချက် မရတစ်ချက်ဖြစ်နေပြီး ကံကြမ္မာကို စောင့်နေတာထက်စာရင် နိုင်ငံခြားကိုသွားပြကြည့်ပါလား။ ဟိုမှာတစ်ခုခုအဖြေပေါ်ပြီး တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ကုနိုင်မှာပါ” ဟူ၍ ဖော်ပြထားခြင်းသည် အဖြစ်မှန်ကို ဖုံးကွယ်၍ လွဲမှားစွာ ရေးသားဖော်ပြထားခြင်းသာဖြစ်သည်။
၈။ ၂၀.၅.၂၀၁၁ ညပိုင်းတွင် လူနာရှင်က လူနာဖြစ်သူအား ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဆေးရုံကြီးတစ်ခုသို့ သွားရောက်ပြသရန်စီစဉ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးက သိရှိရသောအခါတွင်လည်း သဘောထားကြီးစွာ သွားရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ လိုအပ်သော ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းများနှင့် စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်အပြည့်အစုံတို့ကို ရေးသားပေးလိုက်ပြီး လူနာရှင်နှင့်အတူ ယူဆောင်သွားစေခဲ့ပါသည်။ လူနာအား လေဆိပ်သို့ပို့ဆောင်ရာတွင်လည်း ဆေးရုံတွင် လူနာအသုံးပြု ဆဲဖြစ်သော အောက်ဆီဂျင်စက်ကိရိယာများ၊ သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်တိုင်းစက်များဖြင့် ဂရုတစိုက် ပို့ဆောင်စေခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ဆောင်းပါးရှင် သံလျက်၏ ထိုလျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် ပါဆောင်းပါးတွင် “ လေဆိပ်မှာလာကြိုတဲ့ကားနဲ့ မန္တလေးမြို့တွင်းရှိပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကြီးအထိ လူနာကို" မန္တလေးဆေးရုံပေါ်မှာပဲ သူတို့ရဲ့ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေကို စိတ်တိုင်းကျပြောင်းလဲတပ် ဆင်ပြီးမှ လေဆိပ်ကိုလူနာနှင့်အတူ ပြန်လည်လိုက်ပါလာပါတယ်။” ဟုဖော်ပြထားခြင်းမှာ လုံးဝမှားယွင်းပါသည်။
၉။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကုသရန် မထွက်ခွာမီကပင် သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးက ထိုင်းနိုင်ငံရှိဆေးရုံကြီးတွင်လည်း မိမိကုသသည့် ကုသထုံးအတိုင်းပင် ကုသမည်သာဖြစ်ကြောင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသရန် မလိုအပ်ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ လေယာဉ်စင်းလုံးဌားရန်လိုအပ်သည်ထိ အခြေအနေမဆိုးရွားပါကြောင်းဖြင့် လူနာရှင်အား ထပ်မံရှင်းလင်းခဲ့သည်။ စီစဉ်ပြီးဖြစ်သည့်အလျှောက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ၍ စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြသောအခါတွင်လည်း မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီး ကြိုတင်ရှင်းလင်းပြောဆိုထားသကဲ့သို့ပင် ခွဲစိတ်ကုသရန်မလိုအပ် ဘဲ ဆေးဝါးဖြင့်သာ လူနာကို ကုသခဲ့ပေသည်။ ဤသည်ကို ဆောင်းပါးရှင်သံလျက်က ထိုလျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ဆောင်းပါးတွင် “ဒီကိုရောက်တာ အချိန်မီတဲ့အတွက် ခွဲစိတ်ကုသဖို့မလိုဘဲ ပျောက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီး အားပေးစကားပြောတယ်” ဟူ၍ ဖော်ပြထားရာ ဤသည်မှာ ထင်ရှားသောအမှန်တရားတစ်ခုကို တမင်ဖုံးကွယ်လိုသောစိတ်ထားဖြင့်၊ ဆောင်းပါးရှင်သာ သိနိုင်မည်ဖြစ်သောရည်ရွယ်ချက်မျိုးဖြင့် ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ပါသည်။
၁၀။ သို့ဖြစ်ရာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် အတွဲ (၃)၊ အမှတ် (၃၉) စာမျက်နှာ (၁၃) တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ဆောင်းပါးရှင် သံလျက်၏ ဒီလိုဒီလိုရှိတယ် အိုဘယ့်ဆေးဆရာ ဆောင်းပါးသည် မှားယွင်းသောအချက်အလက်များ၊ မှားယွင်းသောအယူအဆများ၊ အမှန်ကိုဖုံးကွယ်၍ လိုရာဆွဲသော အရေးအသားများအပေါ် အခြေခံထားသည့်အလျောက် ပြည်သူ လူထုနှင့် ဆေးပညာရှင်များအကြား နားလည်မှုလွဲမှားနိုင်စေခြင်း၊ ဆေးပညာရှင်များ၏ ဂုဏ်သတင်းကို ထိခိုက်ပျက်ပြားနစ်နာစေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ထင်ရှားနေခြင်းတို့ကြောင့် ဆောင်းပါးရှင် သံလျက်၏ “ဒီလိုဒီလိုရှိတယ် အိုဘယ့်ဆေးဆရာ” ဆောင်းပါးနှင့် ထိုဆောင်းပါးဖော်ပြပါရှိသည့် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် အတွဲ (၃) အမှတ် (၃၉) တို့ကို သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးနှင့် ဆေးပညာရှင်များ ကိုယ်စား မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း(မန္တလေး)က ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချကန့်ကွက်လိုက်သည်။
၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၆)ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ကျင်းပသော အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ